राष्ट्रपति भण्डारी एमालेकी हुन् कि राष्ट्रकी ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी निजी सचिवालय सदस्य सुमित्रा थापाले राष्ट्रपति भण्डारी विश्वको शक्तिशाली महिलाहरुको सूचीमा ५२ औं स्थानमा परेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट बधाइ दिइन् ।
नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति भण्डारी शक्तिशाली महिलाको सूचीमा पर्नु आम नेपालीका लागि गौरवको विषय पनि हो । राष्ट्रपति भण्डारीकी सचिवालय सदस्य थापाले भण्डारीलाई मात्र नभइ आम नेपालीलाई शुभकामना दिएकी छन् ।
थापाले राष्ट्रपति भण्डारीले शुभकामना त दिएकी छन्, तर उनले राष्ट्रपति भण्डारीलाई राष्ट्रको प्रमुख नभइ एमालेको नेताको रुपमा फोटो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेकी छन् ।
एमालेको झण्डा र पोष्टमा राष्ट्रपति भण्डारीको फोटो राखेर शुभकामना दिनुले राष्ट्रपति राष्ट्रको नभइ एमालेको भएको देखाउन खोजिएको छ ।
संविधानअनुसार राष्ट्रपति निर्वा्चित भएको ब्यक्तिले कुनै पनि पार्टी सदस्य परित्याग गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति भण्डारीले पनि राष्ट्रपति भएलगत्तै पार्टी सदस्यता परित्याग गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीकी निजी सचिवालय सदस्य थापा यसअघि एमाले निकट युवा संघ नेपालमा आवद्ध थिइन् । थापाले आफ्नो फेसबुकमा राष्ट्रपतिकी सचिवालय तथा युवा संघ नेपालमा आवद्ध रहेको उल्लेख गरेकी छन् । खवरडवली अनलाईनले लेखेको यो समाचार अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाईरल बनेको छ ।
सेवा दिने नाममा २०१८को ऐनमार्फत नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महाँसघ सिडियो कार्यालयबाट दर्ता भई सञ्चालनमा...
नेपालीहरुको महान् चार्ड दशैं अब नेपालीहरुको घर घरमा आउँदैछ । विदेशिएका नेपाली दाजुभाईहरु दशैं मनाउन आफ्नो घर...
पहिला आन्तरिक लोकतन्त्र स्थापित गर
प्रज्ञाका कुलपति उप्रेतीले आप्mनै ९८५१२२१२.... नम्बर मेरो होइन भनेपछि.....
शिक्षामा बढ्दो व्यापारीकरण
सत्तापक्ष किन रुन्छ ?
नेपालमा खाने तेलको उत्पादन र आयातको अवस्था
कृषिप्रधान देश नेपालमा उत्पादनका धेरै सम्भावनाहरु छन् । तर सम्भावना भएका कृषि उत्पादन पनि यहाँ हुन सकिरहेका...
विकासका लागि साक्षरता
यातायात व्यवसायीले सरकारलाई घुडाँ टेकाउनसम्म टेकायो ।